Cajiibka wuxuu ka caawinayaa in uu barto SEO fudud oo degdeg ah
Si aad u barato siyaabaha loo marayo hal abuuri kara SEO ee 2017, waa inay bartaan dhowr farsamo oo sahlan oo sahlan si ay u gutaan si guul leh. Ugu dambeyntii, waa in qofku ogaadaa sida loo sameeyo baarista iyo falanqaynta ereyada muhiimka ah, baro sida loo dhiso xiriirka iyo la socoshada horumarka ay gaadhaan, iyo ugu dambeyntii, waxay bartaan ku-oolinta maadada
Halkan Oliver King, Maareeyaha Guusha Macaamilka ee Semef , wuxuu eegayaa talooyin waxtar leh oo ku saabsan arrintan.
Inay si buuxda u fahmaan Suuq geynta SEO sannadka 2017, waa in uu qofku bartaa daalacashada, gaar ahaan Mozilla Firefox maadaama uu yahay midka kaliya ee Qiimeynaha Ranker ku rakibo keligiis. Intaa waxa dheer, sida loo isticmaalo Microsoft Excel waa lagama maarmaan maadaama ay jirto wakhti markaa ay tahay inuu ku qoro ereyada muhiimka ah ee ku saabsan kuna daro isticmaalka qaababka. Ugu dambeyntii, xiriir internet oo shaqeynaya.
Dadku waxay sameeyaan mashiinka raadinta codka wax-qabadka oo aad u adag. Si ka duwan diinta caanka ah, SEO uma baahnid mulkiilaha bogga si aad u iibsato software qaali ah ama kireyso hay'ad qaali ah si aad u aragto. Waa nooc shaqo oo sameeya..Markaad fahamto sida aad u socoto, iyo sida ay u shaqeyso, waxay sahlanaaneysaa in la sameeyo boggaga shabakadda si loo hubiyo in ay ku sarayso bogga natiijooyinka raadinta. Marka sidaas la samaynayo, waxaa jira hubsiin kordhinaysa taraafikada maxaa yeelay waxay heleysaa farriimo badan iyo booqashooyin. Ugu dambeyn, haddii websaydhku yahay ganacsi internetka ah, mulkiiluhu wuxuu la kulmi doonaa koritaan muuqda.
Waxaa jira goobo iyo koorsooyin loogu talagalay ardayda ka caawinaya dadka inay bartaan sida loo xoojiyo SEO-ga iyada oo aan la isticmaalin dime. Qodobada ugu caansan ee ay bartaan waxaa ka mid ah:
Sida ugu dhakhsaha badan u baaraan ereyo muhiim ah oo hubiya inay soo jiidato dhagaystayaasha ugu muhiimsan
Sidee dib u cusbooneysiin ujeedada webka si loogu daro makiinadaha kale ee raadinta ee aan ahayn Google
Sida loo abuuro xariiro isugeynaya baabuurta dib u celinta
Sida loo kormeero loona eego horumarka SEO
Sidee loo fududeeyaa Mashiinka Mashiinka Raadinta
Koorsada waxaa ku jira daraasado fiidiyoow ah kuwaas oo si sahlan loo fahmi karo, dhammaantoodna waxay ku caawinayaan inay soo bandhigaan qarsoodiga ah ee ku guulaysta ficilka SEO. Fiidiyowyada waxaa laga heli karaa internetka si loogu sahlo. Intaas waxaa dheer, waxaa jira su'aalo xilliyadeed, oo loogu talagalay in lagu caawiyo fahamka, iyo in ardayga lagu dhiirigeliyo in uu sii joogo.
Qofkasta oo leh fariin yar oo ku saabsan SEO wuxuu ogyahay in qarsoodi ah fulinta guuleysta ay tahay ereyada muhiimka ah. Koorsadu waxay bilaabmaysaa iyadoo la eegayo istaraatiijiyadaha sida caadiga ah loo isticmaalo si loo helo erayada muhiimka ah ee ku habboon dadka dhageystayaasha ah. Kadib markii tan lagu soo gabagabeeyo, tallaabada xigta waa in lagu falanqeeyo ereyada muhiimka ah kadibna mudnaanta koowaad ku saleysneyn heer jaamacadeed iyo caan ah. Tallaabada waxay ku xirantahay sida ay saameyn ugu yeelato waxtarka. Koorsada waxaa ku jira fasal ku saabsan sida loola xisaabinayo Index of Effective Efficiency Index (KEI)
Ardayda, hadda, waxay yeelan doonaan liis dheer oo ereyada muhiimka ah, tallaabada xigta waxay noqon doontaa in ay baraan sida loola tacaalayo waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Halkan, fasalku wuxuu dib u eegayaa sida loogu daro ereyada muhiimka ah ee ku jira bogga iyo sida loo shaqaaleynayo mid kasta oo ka mid ah ereyada muhiimka ah ee bogga kale. Sidoo kale, waxaa jira kulan ay macallimiintu dib u eegayaan farqiga u dhexeeya makiinadaha waaweyn ee raadinta
Kadib wanaajinta faahfaahinta, talaabada xigta waa in la soo jiito taraafikada iyo raadiyaha mashiinka raadiyaha Source . Koorsada waxaa sidoo kale ka mid ah sida ay dadku u dhisaan isku-xirnaanta boggooda